Fitantanana ny « Coliseum » : Ahiana ny hisian’ny fifandonana -
AccueilSongandinaFitantanana ny « Coliseum » : Ahiana ny hisian’ny fifandonana
Fitantanana ny « Coliseum » : Ahiana ny hisian’ny fifandonana
Miisa roa ireo kandidà mibosesika hanatanteraka faradoboka etsy amin’ ny “coliseum” Antsonjombe amin’ity faran’ ny herinandro ity. Ny sabotsy ny an’ny kandidà laharana 13, ary ny alahady kosa ny an’ny kandidà laharana faha-12, izay marihina fa samy nahazo ny alalana avy amin’ ireo tompon’andraikitra isanisany avy. Eo amin’ny fanomanana dia mety efa hisy ny fisakantsakanana, satria dia efa nilaza ny avy amin’ny kandidà laharana faha -12, fa ny fiadidiana ny repoblika no tompon’andraikitra amin’ ny kianja. Ny kandidà faha- 13 anefa, izay ny préfen’ny polisin’ Antananarivo no nanome alalana azy. Tompon’andraikitra amin’ny fandaminana ny toerana ahafahana manatanteraka fampielezan-kevitra ny préfen’ny tanàna sy ny distrika, raha ny voalazan’ny lalàm-pifidianana. Raha ny fitantanana ny kianjan’ny “Coliseum” manokana kosa anefa no asian-teny, dia ny fiadidiana ny repoblika no tompon’andraikitra amin’izany. Raha resaka fifaninanana amin’ ny ankapobeny no jerena, mipetraka hatrany ny paika entina mandemy ny mpifanandrina. Ka amin’izao fotoana mafampana izao, ahiana ny mety hisian’ny fifampihantsiana hiteraka korontana eo amin’ ireo samy kandidà sy ny mpomba azy.
Tsy misy fepetra mazava rahateo ny fandaminana fotoana amina kianja iray samy hampiasain’ny kandidà roa mifanesy. Izany hoe ny kandidà mampiasa ny toerana voalohany ny sabotsy, dia ampitoniana no hanalany ireo fitaovana nampiasainy. Tsy ampieritreretana ny fanomanana mbola hataon’ ny kandidà, ho amin’ ny famaranana ny ampitso. Ny fanomanana atao amin’ ny fety ao amin’ny “coliseum” rahateo, izay nambaran’ireo mpikarakara lanonana fa maharitra iray andro na roa andro mihitsy aza. Vokatr’izay dia mety mbola tsy vita akory ny hetsika ataon’ny kandidà iray, dia efa miditra manao ny fanomanana izay azony ataony ny kandidà mpandimby ny toerana. Ny tompon’entana nofain’ilay kandidà ny sabotsy, raha tsy hanaiky ny fampidiran’ny mpandimby azy ny entana sao misy ny fifangaroana. Hanao ahoana izany ny zavatra hitranga amin’ny faradoboky ny fifidianana raha ny etsy amin’ ny “Coliseum’’manokana no horesahina. Hanaja ny fotoana ve ny kandidà mampiasa ny toerana ny sabotsy, tsy hiditra tonga dia hametraka izay azo hapetraka ve ny Kandidà mila ny toerana ny alahady.
Nipoitra tamin’ny fahanginany ny maître Avoko sy ny antoko tarihiny, Antoko Madagasikara Afaka na MAF, miaraka amin’ny Kung-Fu eto Madagasikara. Manoloana ireo fanaratsiana sy fihantsiana ataon’ireo mpitarika antoko politika mpanohitra mantsy, nanambara ity mpitarika ny ...Tohiny